Maamulka Puntland oo soo saarey warsaxaafadeed ey kaga hadlayaan dagaladii ka dhacay Galgala | Daafeet	Wednesday, October 26th, 2016	Home
Maamulka Puntland oo soo saarey warsaxaafadeed ey kaga hadlayaan dagaladii ka dhacay Galgala
Dec 5, 2012 - Aragtiyood	double diamond slots online casinoDeegaanka Galgala waxaa xalay ka dhacay dagaal u dhaxeeya maleeshiyo ka tirsan kooxda al-Shabaab iyo ciidanka difaaca Puntland.
deutschlands bestes online casino golden tigerMaamul goboleedka Puntland ayaa war-saxaafadeed uu ka soo saaray dagaalka wuxuu ku sheegay inay ciidankooda iska caabbiyeen weerarka uga yimid dhinaca al-Shabaab.
casino slot machine book of ra deluxeWar-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inay koox aad u hubaysan oo ka tirsan al-Shabaab xalay abaare 11:00 PM dhowr jiho ka weerartay cutubyo ka tirsan ciidanka difaaca Puntland oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka Galgala.
War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay inay ciidamada Puntland iska caabbiyeen weerarka, iyagoo dilay toddobo ka tirsanaa maleeshiyada al-Shabaab, isla markaana ay dhaawaceen 12 kalebest casino online in canada.
casino sitePuntland waxay sheegtay inay labo askari uga dhimatay dagaalka, halka toban kalena ay dhaawacmeen kaddib markii qarax miino lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo kale oo Puntland ka tirsan oo gurmad ahaan ugu socday halka uu dagaalka ka dhacay.